Myanmar Robotians Competition 2019 တွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုတွေဆွတ်ခူးခဲ့သည့် GUSTO University Student များ
Call Us: +959 429 991 009, + 959 789 888 222
Life at GUSTO
Myanmar Robotians Competition 2019 တွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုတွေဆွတ်ခူးခဲ့သည့် GUSTO University Student များ
Recent Learning Environments
GUSTO Innovation Awards…
စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ့် GUSTO…
Myanmar Robotians Competition…
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အစိုးရ / ပုဂ္ဂလိက နည်းပညာ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် Myanmar Robotians Competition 2019 စက်ရုပ် ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Myanmar Engineering Council တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ GUSTO University ကိုယ်စားပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှလည်း အုပ်စု ၅ စုဖွဲ့၍ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ 🤖
Federation of Myanmar Engineering Societies အ​​​​နေဖြင့် Robotic Engineering အပေါ် အထူးစိတ်ဝင်စားသည့် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်၊ Robotic Technology နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိသေးသည့် ကျောင်းသားများနှင့်တကွ အများပြည်သူပိုမိုသိရှိစေရန်၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နယ်ပယ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာစေရန်၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ လေ့လာမှုစွမ်းရည်များကို လက်တွေ့တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်စေရန်၊ Robotic Engineering နှင့် Computer Science ဘာသာရပ်များအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သော ယခုပြိုင်ပွဲတွင် GUSTO University မှ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်လိုသည့်အတွက် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
​ပြိုင်ပွဲတွင် GUSTO University မှ Junior Level Team များအနေဖြင့်
3.Ma and the boys
4.Nanobots အဖြစ် ၄ ဖွဲ့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး
Senior Level Team အခန်းကဏ္ဍတွင် GUSTO University Team မှ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
Urban development များ၊ Smart Cities များ ဖြစ်ပေါ်လာစေမည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် အရေးပါသော Robot များကို ဖန်တီးရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်လွန်စွာများပြားသည်ဟူသော ဘောင်ထဲမှအတွေးအမြင်ကို ပြောင်းလဲကာ GUSTO University မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများက ကုန်ကျစရိတ်အနည်ဆုံးဖြင့် Robot တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ကြောင်း
Recycle product တွေကို အကျိုးရှိရှိ ပြန်လည် အသုံချနိုင်ကြောင်းကို ဒီ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြုလုပ်ထားသည့် သူတို့၏ Robot ဖြင့် သက်သေတစ်ခုပြခဲ့ပါတယ်။ ⚙️ ♻️ 🔋 🌐
Robot body ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များပြားနိုင်မည့် Acrylic ပြားများ၊ သံပြားများအား အသုံးမ​ပြုဘဲ Recycle ပြုလုပ်နိုင်သော ကတ်ထူစက္ကူကို အသုံးပြုကာ Robot Model တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ပြသ ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုလို ထူးခြားသောအတွေးအခေါ်ဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမှာ GUSTO University မှ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ သင်ပြ လမ်းညွှန်မှုများ၊ ပံ့ပိုးမှုများကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်း ယခုလို ပြိုင်ပွဲများတွင် အ​ကောင်းဆုံးပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အသင်းအဖွဲ့နှင့် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရသည့်စွမ်းရည်၊ တာဝန်ခံ တာဝန်ယူတတ်မှုစွမ်းရည်၊ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်နှင့် အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာသည့်အတွက် GUSTO University ၏ မျှော်မှန်းချက် Graduate Attributes ဖြင့် ပိုမို ပြည့်စုံလာမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Academic Team ကို များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
287/289 , U Wisara Road, (Between Ma Po Street & Shangone Street)
Sanchaung Township, Yangon.
Campus ( 2)
NO. 289 (A), Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon
Call Now : +959 429 991 009, + 959 789 888 222
Mail To : info@gusto-education.com
© 2021 GUSTO UNIVERSITY. All rights reserved.
Complete the form to get an information pack. Thank you!